Iindaba | Eyedwarha 2021
Kargil Vijay Diwas Quotes: Ukukhumbula Abafeli-nkolo
Nge-26 kaJulayi minyaka le, uKargil Vijay Diwas ubhiyozelwa ukukhumbula amajoni emfazwe aphulukana nobomi bawo ngenxa yelizwe lethu kwaye enze 'i-Operation Vijay' ibe yimpumelelo. Masikhumbule la majoni akhaliphileyo aseIndiya ngokufunda kunye nokwabelana ngezi ngcaphuno zokukhuthaza.
Usuku lweLizwe lokuThintela ukuzibulala ngo-2019: I-WHO yokuSungula iphulo, 'i-40 Seconds of Action' yokuKwazisa
USuku lweHlabathi lokuThintela ukuzibulala (WSPD) lubonwa nge-10 Septemba minyaka le. I-WHO izakusungula iphulo, imizuzwana engama-40 yokusebenza, yokwazisa abantu ngokuzibulala.
Bukela: Owayengumphathiswa wezeziMali u-Arun Jaitley udlula kwi-66: ii-Quotes zokukhuthaza
U-Arun Jaitley, owayengumphathiswa wezemali e-India usweleke nge-12: 07 pm nge-24 ka-Agasti. Uye wenziwa utyando lwezintso kunyaka ophelileyo kunye notyando lwe-bariatric ngonyaka ka-2014. Nge-9 ka-Agasti, wangeniswa kwi-AIIMS ngenxa yemicimbi yokuphefumla kodwa kwathiwa uzinzile kamva.
UKargil Vijay Diwas 2020: Kwenzeke ntoni ngale mini kule minyaka ingama-21 igqithileyo? Imbali kunye nokuBaluleka
UKargil Vijay Diwas ubhiyozelwa minyaka le nge-26 kaJulayi ukusukela ngo-1999 emva kwempumelelo ye-Operation Vijay. Unyaka we-2020 uphawula isikhumbuzo sama-21 semfazwe yeKargil. Imfazwe yaseKargil ithetha ngobukroti bamajoni aseIndiya kunye nempumelelo yeOperation Vijay.
Yintoni ongayityiyo kwirhashalala
ungayithatha njani imbewu yefenugreek yeswekile
igama lokuqala incwadi ngokusekelwe kumhla wokuzalwa
iapile cider iviniga kunye netyuwa yeentlungu zedolo
indlela yokunqula inkosi ganesha yonke imihla
olona nyango lwasekhaya lwezilonda zomlomo
ukunciphisa izinqe kunye namathanga ngokwemvelo